Mofon’aina – TALATA 21 AOGOSITRA 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 21 AOGOSITRA 2018
47 Ary raha mbola niteny Jesoa, indreo, tamy ny vahoaka, ary ilay atao hoe Jodasy, isan’ ny roa ambin’ ny folo lahy, dia nandeha teo alohany ka nanatona an’ i Jesoa hanoroka Azy.48 Fa hoy Jesoa taminy: Ry Jodasy, fanorohana va no amadihanao ny Zanak’ olona?49 Ary izay teo aminy, raha nahita izay efa hanjo, dia nanao hoe: Tompoko, hamely amin’ ny sabatra va izahay?50 Ary ny anankiray teo aminy dia nikapa ny mpanompon’ ny mpisoronabe ka nahafaka ny sofiny ankavanana.51 Fa Jesoa namaly ka nanao hoe: Aoka ihany na dia izao aza. Dia nanendry ny sofiny Izy ka nahasitrana azy.52 Ary hoy Jesoa tamin’ ny lohan’ ny mpisorona sy ny lehiben’ ny mpiambina ny tempoly ary ny loholona izay tonga hisambotra Azy: Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny hisambotra jiolahy va ianareo?53 Raha teo aminareo isan-andro teo an-kianjan’ ny tempoly Aho, dia tsy naninji-tanana tamiko ianareo; fa izao no fotoanareo sy herin’ ny maizina.
LIOKA 22 : 47-53
IREO HERISETRA MPAHAZO NY MINO
Ity pcrikopa ity dia maneho mintsika irco karazana herisetra nihatra tamin’i Jesoa. Maro amin’ny mpino ankehitriny no iharan’izany herisetra izany dia :
1-Ny fihatsaram-belatsihy (and. 47-48)
Ny fihatsarana ivelan-tsihy dia fisehoana ho tsara raha amin’ny endrika ivelany kanefa ratsy ny ao anaty. Niseho ho tia an’i Jesoa tamin’ny endrika ivelany i Jodasy kanefa ny mifanohitra amin’izay no tao am-pony. Endrika ivelany fanehoam-pitiavana ny oroka saingy famadihana no tao ambadik’izany ho an’i Jodasy. Ialao ny fihatsaram-belatsihy fa herisetra miafin’endrika izany ary mety hamono ny hafa mihintsy.
2-Nv herisetra ara-batana (and. 49-50)
Nampiasa fitaovam-piadiana avy hatrahy ny mpianatra teo anatrehan’ny fisamborana natao an-keriny an’i Jesoa. Nosakanan’i Jesoa avy hatrany izany fihetsika izany na dia nanana endrika fiarovana sy fanehoam-pitavana Azy avy amin’ny mpianatra aza. Tsy ankasitrahan’ny Tompo velively ny fampiasan-kery sy ny fanaovunu herisetra avy amin’ny mpanara-dia Azy na inona na inona antony mety hanosika hanao izany. Izay amintinan’ny Tompo azy dia mazava: na olon-tokana (and 51), na andian’olona (and 52) no anao herisetra dia ny herin’ny maizina hatnany no manosika hanao izany (and. 53).
Inona no tokony hatao mba tsy ho lasa fiasan’ïlay ratsy hanao herisetra isika?